Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Misy fikambanana ambaniandro hanohana « côtier »
Fifidianana: Misy fikambanana ambaniandro hanohana « côtier »
Mivoatra dia mivoatra tokoa ny raharaha pôlitika eto Madagasikara ankehitrny. Miforona ankehitriny ny fikambanana ambaniandro izay hanohana kandidà “côtier” na tanindrana amin’izao fotoana izao. Tsy dia zava-baovao loatra izany raha ny tantaran’i Madagasikara no asian-teny saingy nisy simba izany nanomboka ny taona 2001 izay nitondran’ingahy Marc Ravalomanana ny firenena. Tamin’iny taona 2001 iny no nisy ny filazana fa “anay Ambaniandro indray izao no mitondra eto Madagasikara fa ampy izay ny fitondrana tanindrana na “côtier”. Nanomboka teo dia Ambaniandro indray no nitondra ny firenena dia ingahy Ravalomanana Marc ny taona 2001-2009, ingahy Andry Nirina Rajoelina tamin’ny fanjakana tetezamita 2009-2013, ary ingahy Hery Rajaonarimampianina indray no filoham-pirenena tamin’ity repoblika fahefatra ity nanomboka ny taona 2013 ka hatramin’izao 2018 izao. Nampitondra faisana ny firenena nefa izy telolahy ireo ka izao zavatra iainana izao no vokany.
Raha mandeha miroso lavidavitra amin’ny tantaram-pirenena hatrany isika dia ingahy Philibert Tsiranana no Rain’ny fahaleovan-tenam-pirenena ka nitondra tamin’ny taona 1960-1972. Nandalo fotoan-tsarotra ny firenena ny taona 1972-1975 ka nifandimby tamin’izany ny jeneraly Gabriel Ramanantsoa, ny Colonel Ratsimandrava, ary ny Jeneraly Gilles Andriamahazo. Azo lazaina fa fohy dia fohy no nitondran’izy ireo. Ny Amiraly Didier Ratsiraka indray no filoham-pirenena nanomboka ny taona 1975-1991 tamin’ny repoblika faharoa. Nodimbiasin’i Profesora Zafy Albert izany ny taona 1993-1996, rehefa nandalo tetezamita nentin’ingahy Praiministra Guy Willy Razanamasy tao anatin’ny iray taona sy tapany teo. Mbola lany indray ny Amiraly Didier Ratsiraka ny taona 1997-2001 tao aorian’ny tetezamita nitondran’ingahy Norbert Lala Ratsirahonana tao anatin’ny 8 volana teo ho eo ny taona 1996-1997.
Raha toa ary ka filoham-pirenena tanindrana telolahy na “côtiers” no nitondra ny firenena hatramin’ny taona 1960-2001, dia nivadika ho Ambaniandro nanomboka ny taona 2001 ka hatramin’izao 2018 izao.
Nampitaha ny fitondrana nentin’ny roa tonta ireto ny Malagasy maro ankehitriny ka maro no tofoka amin’ny fomba nitondran’ireto Merina ireto ny firenena. Niforona indray ary ny fikambanana ambaniandro izay nanapa-kevitra ankehitriny rehefa avy nandinika ny raharaham-pirenena ka nahatsapa fa tsara dia tsara tokoa ny fitondrana nentin’ny “côtiers” na ireo tanindrana telo lahy dia Philibert Tsiranana, Ratsiraka Didier, ary Zafy Albert raha ampitahaina amin’ny fitondran’ingahy Marc Ravalomanana Marc, Andry Nirina Rajoelina, ary Hery Rajaonarimampianina.
Efa be dia be ny zavatra notenenina mahakasika azy telolahy farany ireto amin’ny tsy fahaizan’izy ireo mitondra firenena hoy ihany ireto mpikambana amin’ny Ambaniandro hanohana kandidà tanindrana ireto. Ampy izay hoy ireto olona ireto fa aleo hijery tanindrana indray. Milaza koa ireto olona ireto fa efa mahita olona “côtier” afaka hitondra firenena tsara izy ireo. Voalazany fa manam-pahaizana, madio sady tsy voarohirohy amin’ny halatra na kolikoly ary fangalarana volam-panjakana. Mbola mahay miara-monina amin’ny rehetra koa hono izany olona izany raha tafaresaka taminay hatrany ireto olona izay mivondrona amin’ny fikambanan’ny Ambaniandro hanohana tanindrana ireto amin’ny fifidianana.
Nanambara koa ny lohandohan’ity fikambanana ity fa tsy misy idiran’ny resaka foko ny raharaham-pirenena fa aoka ho an’ny olona izay hita fa afaka hitondra ny firenena no hofidian’ny Malagasy na tanindrana izy na aty afovoan-tany. Mila fanarenana maika izao zavatra misy eto Madagasikara izao hoy ireto Ambaniandro ireto. Ho avy moa ny fotoana izay hisehoan’ity fikambanana ity araka ny voalazan’izy ireo ka amin’izay fotoana izay no hahitantsika azy ireo sy ny olona tanindrana hotohanan’izy ireo.
Lôla Rasoamaharo sy Jesy Rabelaolao